music — njem Lee - Official Site
Iji ibuga ozi ya, Njem ahụ were a dị iche iche obibia Ndekọ a gburugburu. Kama akwado multiple emepụta, ọ na-arụ ọrụ nanị nọworo ogologo oge na-emeputa Gawvi maka dum album na ya Atlanta studio. Sonically, Rise akpa otu “Shweet” na-egosiputa nnukwu talent nke ma Gawvi na Njem Lee. Na ya siruru mmepụta, na track nods ka na kpochapụwo ala Ndida Houston ibiaghachi na New York-style ịkọ akụkọ. Njem ahụ amaokwu ka bụrụ vivid ka ha na ndị dị oké mkpa. Ka ọ dịgodị, “Sweet Victory” -ewuli si a di ntakiri amaokwu n'ime a na iweta oké nko na nke ahụ n'otu ntabi tọkwara dị ka Njem si na-efe efe eruba-ewe jide. “Manolo” huru na ya otu ugboro ọzọ Team elu na-apụghị Iru Records’ onwe isi nwoke na ezigbo enyi Lecrae. ọnụ, ha abua tụgharịa ọzọ hip-iwuli elu paradigm aghụghọ n'etiti tightly kpara rhyme ezimezi oku.